ထူးခြားအံသြစရာ ၊ အချက်၅၀ - Thutazone
ထူးခြားအံသြစရာ ၊ အချက်၅၀
By ThutammPosted on January 20, 2018 March 19, 2018
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မယုံကြည်နိုင်စရာ အကြောင်းအရာတို့သည် ကမ္ဘာဦးတည်စမှပင် ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ပျက်နေကြသကဲ့ သို့၊မယုံနိုင်စရာအံ့သြဖွယ်အကြောင်းအချက်တို့ကိုလည်းလူသားတို့ကအမြဲရှာဖွေတွေ့ရှိဖော်ထုတ်လျက်ရှိနေကြပါသည်။လူသားအများစုတို့သည်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်များကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြသဖြင့်အံ့သြဖွယ်အချက်အလက်များစွာတို့ကိုစူးစမ်းလေ့ရှိကြပေရာ၊ယင်းတို့အနက်မှ ထင်ရှားသောအံ့ဖွယ်အချက် ၅၀ ကို တင်ပြလိုပါသည်။
၁၊ မိုးကြိုးအပစ်ခံရသော လူတစ်ယောက်သည် မိုးကြိုးအပစ်ခံရချိန်တွင်နေမျက်နှာပြင်ထက်ပိုပူပြင်းသော အပူချိန် ၂၈၀၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ဖြင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၊ သင်၏ မိသားစုရာဇ၀င်ကို မျိုးဆက် ၂၅ ဆက်မှစတင်ရေးဆွဲကြည့်မည်ဆိုပါက ဘိုးဘွားဘီဘင်တို့မှ ဆင်းသက်လာသူ ပေါင်း ၃၃၅၅၄၄၃၂ ဦးမျှရှိပေလိမ့်မည်။ထိုစာရင်းတွင် အမျိုးချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမှပေါက်ဖွားလာကြသူများမပါဝင်သေးပါ။
၃၊ ကောင်းကင်မှ ကြယ်များ၏ ပျမ်းမျှအကွာအဝေးသည်မိုင်ပေါင်း သန်း၂၀ ဖြစ်ပါ၏။
၄၊ ဤကမ္ဘာမှာ အနီးသို့ ကြယ်တစ်လုံးဆီသို့ခရီးနှင်ရန် ခေတ်မီအာကာသယာဉ်တစ်စီးသည် နှစ်ပေါင်း ၇ သောင်းမျှ သွားရ ပေလိမ့်မည်။
၅၊ ဥက္ကာပျံများ ကြွေကျမှုကြောင့် ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒိုင်နိုဆော သတ္တ၀ါများ မျိုးသုဉ်းခဲ့ကြရသော်လည်း ဖားနှင့် ပုတ်သင်ညို များမှာမူ မည်သို့မျှ မဖြစ်ခဲ့ကြပါချေ။ယင်းတို့သာမက မိကျောင်းများနှင့်လိပ်များသည်လည်း အဘယ်ကြောင့် ယနေ့တိုင် အသက် ရှင်ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို မည်သူမျှ မသိရှိကြပါသေးချေ။
၆၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဗဟိုသို့ တွင်းတစ်တွင်းတူးပြီး အုတ်ခဲ တစ်လုံးကို ပစ်ချလိုက်မည်ဆိုပါက မိုင်ပေါင်း ၄၀၀၀ မျှ အနက်သို့ ရောက်ရန် ၄၅ မိနစ်မျှ ကြာမြင့်ပေလိမ့်မည်။
၇၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားမှ နေ့စဉ်ချေးဖတ်ပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံ ထွက်ရှိနေသည်။
၈၊ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာကမ္ဘာ၏ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ်ကြည့်နိုင်မည်ဆိုပါက တန်ပေါင်း သန်းပေါင်း သန်း ၆၅၀၀ သန်းမျှ ရှိပေလိမ့်မည်။
၉၊ ပျားရည်သည် လူသားတို့ စားသုံးသည့် တစ်ခုတည်းသော မပုပ်သိုးနိုင်သည့် စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
၁၀၊ ဟာဝိုင်ယီ ဘာသာတွင် အက္ခရာ ၁၂ လုံးသာရှိသည်။
၁၁၊ မြည်းကိုသားစပ်၍ရသော်လည်း လားအချင်းချင်းသားစပ်၍ မရချေ။
၁၂၊ နှာတစ်ချက် ချေလိုက်တိုင်း နှလုံးက တစ်စက္ကန့်မျှ ရပ်တန့်သွားသည်။
၁၃၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ၊ ဘာမင်ကမ်တွင်ရှိသောတူးမြောင်းများသည် အီတလီနိုင်ငံ၊ ဗင်းနစ်မှ တူးမြောင်းများထက် ၂၂ မိုင်မျှပိုမိုရှည် လျားသည်။
၁၄၊ အာလူးကြော်ကိုMr. Crumm ဆိုသူက တီထွင်ခဲ့သည်။
၁၅၊ Facetious နှင့် abstemious စာလုံးများတွင် သရ များ အစဉ်လိုက်ရှိနေသည်။
၁၆၊ အက်စကီမို တို့တွင် နှင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝေါဟာရ ရာနှင့်ချီရှိသော်လည်း ဟယ်လို ဟူသော စကားလုံးတစ်လုံးမျှ မရှိချေ။
၁၇၊ အင်္ဂလ်ိပ်ဘာသာတွင် set ဟူသော စာလုံးသည် အဓိပ္ပါယ်အများဆုံးဖြစ်သည်။
၁၈၊ uncopyrightable စာလုံးသည် အက္ခရာ ၁၅ လုံးခန့်ရှိသော်လည်း အက္ခရာ တစ်လုံးသည် တစ်ကြိမ်ခန့်စီသာပါဝင်သည်။
၁၉၊ လေရဟတ်( windmill ) တို့သည် လက်ဝဲရစ်( နာရီလက်တံပြောင်းပြန်) သာအမြဲလည်ပတ်ကြသည်။
၂၀၊ “Sixth Sick Sheik’s Sixth Sheep’s Sick” သည် ရွတ်ဆိုရ အခက်ခဲဆုံးသော လျှာလိမ်စကားဖြစ်သည်။
၂၁၊ ကမ္ဘာ့အတိုဆုံး စစ်ပွဲမှာ ၃၈ မိနစ်သာ ကြာမြင့်သည်။ အင်္ဂလန် နှင့် ဇန်ဇီဘားတို့ တိုက်ကြသောတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး Anglo-Zanzibar War ဟုခေါ်သည်။
၂၂၊ အောက်ပါကိန်းတို့၏ ထူးခြားမှုသည်လည်း အံ့ဖွယ်တစ်ခုပါပင်။
၂၃၊ Dreamt စာလုံးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် mt ဖြင့်ဆုံးသော တစ်ခုတည်းသော စာလုံးဖြစ်သည်။
၂၄၊ သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ခြေအိတ်မ၀တ်ခဲ့ပါချေ။
၂၅၊ လူသာမာန်တစ်ယောက်သည် သူ၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်း ပင့်ကူမျှင် ၈ခု ခန့်ကို စားမိပေ လိမ့်မည်။
၂၆၊ အာကာသသို့ ရောက်ရှိနေသူများသည် အာကာသအတွင်း၌ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားမဲ့သောကြောင့် ငို၍မရနိုင်ချေ။
၂၇၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိရှိသမျှ ငှက်များအနက် ငှက်ပိတုန်းများသည်သာ လေတွင် နောက်ပြန်ပျံသန်းနိုင်ကြသည်။
၂၈၊ ငှက်ကုလားအုပ်၏ မျက်လုံးသည် ယင်းတို့၏ ဦးဏှောက်ထက်ပို၍ အရွယ်ပမာဏကြီးမားသည်။
၂၉၊ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်သည် ဦးခေါင်းမရှိဘဲ ( အစာငတ်သေသည်အထိ ) ၉ ရက်အထိ အသက်ရှင်နေနိုင်သည်။
၃၀၊ ခြေတံနီ ကြိုးကြာများသည် ဦးခေါင်းစောက်ထိုးအနေအထားဖြင့် အစာ စားနိုင်ကြသည်။
၃၁၊ မီးခြစ်ဆံ မပေါ်မီ မီးခြစ်ကို တီထွင်ခဲ့သည်။
၃၂၊ ဘယ်သန်များသည် ညာသန်သူများထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၇ နှစ် အသက်တိုလေ့ရှိသည်။
၃၃၊ သာမာန်လူတစ်ယောက်သည် တစ်သက်တာ အတွင်းအိပ်မက် ၁၄၆၀ ခန့် မက်သည်။
၃၄၊ မိုးရေစက်ကို မြန်နှုန်းမြင့် ကင်မရာများဖြင့် ရိုက်ကူးကြည့်ရာ မျက်ရည်စက်နှင့် မတူဘဲ ဟန်ဘာဂါနှင့် တူညီနေသည် ကို တွေ့ရသည်။
၃၅၊ ပထမဆုံး အင်တာနက်ဒိုမိန်း အမည်မှာ Symbolic.com ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
၃၆၊ ၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် ဂရေဟမ်ဘဲလ်က တယ်လီဖုန်းကိုတီထွင်ခဲ့ရာတွင် ပထမဆုံးလအတွင်း တယ်လီဖုန်း ခြောက်လုံးသာ ရောင်းချခဲ့ရသည်။
၃၇၊ ရုံးများ၏ စာရွက်စာတမ်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ပျောက်ဆုံးမြဲပင်ဖြစ်သည်။
၃၈၊ Business.com အမည်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်ဈေအကြီးဆုံး ဒိုမိန်းဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့ရသည်။
၃၉၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က တန်ဘိုးအမြင့်ဆုံး ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ငါးမျိုးမှာ Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE နှင့် Nokia တို့ဖြစ်သည်။
၄၀၊ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား အကောင်းဆုံးနေ့မှာ အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်။
၄၁၊ ရှိကာဂို တက္ကသိုလ်၏ ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်တမ်းများအရ အလွယ်ကူဆုံး မြင်လွယ်သော အရောင်သည် အ၀ါရောင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။အဘယ်ကြောင့် ဟူမူကား ရှိကာဂိုမှ Yellow Cab အငှားကားကုမ္ပဏီသည် ယင်း၏ ကား အားလုံးကို အ၀ါရောင် သုတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
၄၂၊ The New York Times သတင်းစာ၏ တနင်္ဂနွေထုတ် သတင်းစာများ ထုတ်ဝေနိုင်ရန်အတွက် ပျမ်းမျှ သစ်ပင်ပေါင်း ၆၃၀၀၀ ကို သတင်းစာစက္ကူ ပြုလုပ်ရသည်။
၄၃၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် မိတ္တူ ၁၉ ကြိမ်ဆွဲရလေ့ရှိသည်။
၄၄၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အလုပ်ရှင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အိန္ဒိယ မီးရထားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်း ၁ ဒသမ ၆ သန်းခန့် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
၄၅၊ Happy Birthday တေးသီချင်းကို Warner Chappel ဂီတအဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်ထားလေရာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသုံးပြုရန် မူပိုင်ခွင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒေါ်လာ ၁ သန်းခန့်ရရှိသည်။
၄၆၊ ကလေးတိုင်းသည် မွေးဖွားစတွင် အရောင်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိကြပါချေ။
၄၇၊ ကလေးများသည် နွေဦးပေါက်ရာသီ တွင် အခြားအချိန်များထက် ပို၍ကြီးထွားလေ့ရှိသည်။
၄၈၊ လူတို့၏ နှာခေါင်းပေါက် နှစ်ပေါက်သည် အနံ့ အမျိုးမျိုးကို ခံယူသည်ဖြစ်ရာယာဖက်နှာခေါင်းပေါက်က ၀ဲဖက် နှာခေါင်း ပေါက်ထက်ပို၍ အနံ့ကောင်းများကို ခံယူနိုင်သည်။သို့သော်လည်း မည်သည့် အနံ့ ဖြစ်သည်ကို ၀ဲဖက်နှာခေါင်းပေါက်က အတိ အကျ သိရှိနိုင်သည်။
၄၉၊ လူတို့ကို မွေးဖွားစဉ်က အရိုး သုံးရာငါးဆယ် ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် အရိုး ၂၆၀ ခန့်သာ ရှိတော့သည်။
အရိုးတို့သည် တစ်ခုနှင့် ဆက်ကာ တစ်ချောင်းတည်းဖြစ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅၀၊ မေလတွင်မွေးဖွားသောကလေးများသည် အခြားလ များတွင်မွေးဖွားသော ကလေးများထက် ၂၀၀ ဂရမ်မျှ ပိုလေးတတ်သည်။
( ဂမ္ဘီရဆန်းကြယ် မဂ္ဂဇင်း )
ထူးခွားအံဩစရာ ၊ အခကျြ၅၀ (unicode)
ကမ်ဘာပျေါတှငျ မယုံကွညျနိုငျစရာ အကွောငျးအရာတို့သညျ ကမ်ဘာဦးတညျစမှပငျ ယနတေို့ငျအောငျဖွဈပကျြနကွေသကဲ့ သို့၊မယုံနိုငျစရာအံ့ဩဖှယျအကွောငျးအခကျြတို့ကိုလညျးလူသားတို့ကအမွဲရှာဖှတှေရှေိ့ဖျောထုတျလကျြရှိနကွေပါသညျ။လူသားအမြားစုတို့သညျထူးဆနျးအံ့ဖှယျမြားကိုစိတျဝငျစားတတျကွသဖွငျ့အံ့ဩဖှယျအခကျြအလကျမြားစှာတို့ကိုစူးစမျးလရှေိ့ကွပရော၊ယငျးတို့အနကျမှ ထငျရှားသောအံ့ဖှယျအခကျြ ၅၀ ကို တငျပွလိုပါသညျ။
၁၊ မိုးကွိုးအပဈခံရသော လူတဈယောကျသညျ မိုးကွိုးအပဈခံရခြိနျတှငျနမေကျြနှာပွငျထကျပိုပူပွငျးသော အပူခြိနျ ၂၈၀၀၀ ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျဖွငျ့ လောငျကြှမျးခွငျးခံရမညျဖွဈပါသညျ။
၂၊ သငျ၏ မိသားစုရာဇဝငျကို မြိုးဆကျ ၂၅ ဆကျမှစတငျရေးဆှဲကွညျ့မညျဆိုပါက ဘိုးဘှားဘီဘငျတို့မှ ဆငျးသကျလာသူ ပေါငျး ၃၃၅၅၄၄၃၂ ဦးမြှရှိပလေိမျ့မညျ။ထိုစာရငျးတှငျ အမြိုးခငျြးပေါငျးသငျးဆကျဆံမှုမှပေါကျဖှားလာကွသူမြားမပါဝငျသေးပါ။
၃၊ ကောငျးကငျမှ ကွယျမြား၏ ပမျြးမြှအကှာအဝေးသညျမိုငျပေါငျး သနျး၂၀ ဖွဈပါ၏။
၄၊ ဤကမ်ဘာမှာ အနီးသို့ ကွယျတဈလုံးဆီသို့ခရီးနှငျရနျ ခတျေမီအာကာသယာဉျတဈစီးသညျ နှဈပေါငျး ၇ သောငျးမြှ သှားရ ပလေိမျ့မညျ။
၅၊ ဥက်ကာပြံမြား ကွှကေမြှုကွောငျ့ ဤကမ်ဘာပျေါတှငျ ဒိုငျနိုဆော သတ်တဝါမြား မြိုးသုဉျးခဲ့ကွရသျောလညျး ဖားနှငျ့ ပုတျသငျညို မြားမှာမူ မညျသို့မြှ မဖွဈခဲ့ကွပါခြေ။ယငျးတို့သာမက မိကြောငျးမြားနှငျ့လိပျမြားသညျလညျး အဘယျကွောငျ့ ယနတေို့ငျ အသကျ ရှငျကနျြရှိနသေေးသညျကို မညျသူမြှ မသိရှိကွပါသေးခြေ။
၆၊ ကမ်ဘာမွကွေီး၏ ဗဟိုသို့ တှငျးတဈတှငျးတူးပွီး အုတျခဲ တဈလုံးကို ပဈခလြိုကျမညျဆိုပါက မိုငျပေါငျး ၄၀၀၀ မြှ အနကျသို့ ရောကျရနျ ၄၅ မိနဈမြှ ကွာမွငျ့ပလေိမျ့မညျ။
၇၊ သငျ၏ခန်ဓာကိုယျ အရပွေားမှ နစေ့ဉျခြေးဖတျပေါငျး ၁၀ ဘီလီယံ ထှကျရှိနသေညျ။
၈၊ ကြှနျုပျတို့နထေိုငျရာကမ်ဘာ၏ အလေးခြိနျကို ခြိနျတှယျကွညျ့နိုငျမညျဆိုပါက တနျပေါငျး သနျးပေါငျး သနျး ၆၅၀၀ သနျးမြှ ရှိပလေိမျ့မညျ။
၉၊ ပြားရညျသညျ လူသားတို့ စားသုံးသညျ့ တဈခုတညျးသော မပုပျသိုးနိုငျသညျ့ စားဖှယျဖွဈသညျ။
၁၀၊ ဟာဝိုငျယီ ဘာသာတှငျ အက်ခရာ ၁၂ လုံးသာရှိသညျ။
၁၁၊ မွညျးကိုသားစပျ၍ရသျောလညျး လားအခငျြးခငျြးသားစပျ၍ မရခြေ။
၁၂၊ နှာတဈခကျြ ခလြေိုကျတိုငျး နှလုံးက တဈစက်ကနျ့မြှ ရပျတနျ့သှားသညျ။
၁၃၊ အင်ျဂလနျနိုငျငံ ၊ ဘာမငျကမျတှငျရှိသောတူးမွောငျးမြားသညျ အီတလီနိုငျငံ၊ ဗငျးနဈမှ တူးမွောငျးမြားထကျ ၂၂ မိုငျမြှပိုမိုရှညျ လြားသညျ။
၁၄၊ အာလူးကွျောကိုMr. Crumm ဆိုသူက တီထှငျခဲ့သညျ။
၁၅၊ Facetious နှငျ့ abstemious စာလုံးမြားတှငျ သရ မြား အစဉျလိုကျရှိနသေညျ။
၁၆၊ အကျစကီမို တို့တှငျ နှငျးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဝေါဟာရ ရာနှငျ့ခြီရှိသျောလညျး ဟယျလို ဟူသော စကားလုံးတဈလုံးမြှ မရှိခြေ။
၁၇၊ အင်ျဂလျိပျဘာသာတှငျ set ဟူသော စာလုံးသညျ အဓိပ်ပါယျအမြားဆုံးဖွဈသညျ။
၁၈၊ uncopyrightable စာလုံးသညျ အက်ခရာ ၁၅ လုံးခနျ့ရှိသျောလညျး အက်ခရာ တဈလုံးသညျ တဈကွိမျခနျ့စီသာပါဝငျသညျ။
၁၉၊ လရေဟတျ( windmill ) တို့သညျ လကျဝဲရဈ( နာရီလကျတံပွောငျးပွနျ) သာအမွဲလညျပတျကွသညျ။
၂၀၊ “Sixth Sick Sheik’s Sixth Sheep’s Sick” သညျ ရှတျဆိုရ အခကျခဲဆုံးသော လြှာလိမျစကားဖွဈသညျ။
၂၁၊ ကမ်ဘာ့အတိုဆုံး စဈပှဲမှာ ၃၈ မိနဈသာ ကွာမွငျ့သညျ။ အင်ျဂလနျ နှငျ့ ဇနျဇီဘားတို့ တိုကျကွသောတိုကျပှဲဖွဈပွီး Anglo-Zanzibar War ဟုချေါသညျ။
၂၂၊ အောကျပါကိနျးတို့၏ ထူးခွားမှုသညျလညျး အံ့ဖှယျတဈခုပါပငျ။
၂၃၊ Dreamt စာလုံးသညျ အင်ျဂလိပျဘာသာတှငျ mt ဖွငျ့ဆုံးသော တဈခုတညျးသော စာလုံးဖွဈသညျ။
၂၄၊ သိပ်ပံပညာရှငျ အိုငျးစတိုငျးသညျ မညျသညျ့အခါမြှ ခွအေိတျမဝတျခဲ့ပါခြေ။
၂၅၊ လူသာမာနျတဈယောကျသညျ သူ၏ သကျတမျးတဈလြှောကျတှငျ အိပျပြျောနစေဉျအတှငျး ပငျ့ကူမြှငျ ၈ခု ခနျ့ကို စားမိပေ လိမျ့မညျ။
၂၆၊ အာကာသသို့ ရောကျရှိနသေူမြားသညျ အာကာသအတှငျး၌ ကမ်ဘာ့ဆှဲအားမဲ့သောကွောငျ့ ငို၍မရနိုငျခြေ။
၂၇၊ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ရှိရှိသမြှ ငှကျမြားအနကျ ငှကျပိတုနျးမြားသညျသာ လတှေငျ နောကျပွနျပြံသနျးနိုငျကွသညျ။
၂၈၊ ငှကျကုလားအုပျ၏ မကျြလုံးသညျ ယငျးတို့၏ ဦးဏှောကျထကျပို၍ အရှယျပမာဏကွီးမားသညျ။
၂၉၊ ပိုးဟပျတဈကောငျသညျ ဦးခေါငျးမရှိဘဲ ( အစာငတျသသေညျအထိ ) ၉ ရကျအထိ အသကျရှငျနနေိုငျသညျ။
၃၀၊ ခွတေံနီ ကွိုးကွာမြားသညျ ဦးခေါငျးစောကျထိုးအနအေထားဖွငျ့ အစာ စားနိုငျကွသညျ။
၃၁၊ မီးခွဈဆံ မပျေါမီ မီးခွဈကို တီထှငျခဲ့သညျ။
၃၂၊ ဘယျသနျမြားသညျ ညာသနျသူမြားထကျ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ ၇ နှဈ အသကျတိုလရှေိ့သညျ။
၃၃၊ သာမာနျလူတဈယောကျသညျ တဈသကျတာ အတှငျးအိပျမကျ ၁၄၆၀ ခနျ့ မကျသညျ။
၃၄၊ မိုးရစေကျကို မွနျနှုနျးမွငျ့ ကငျမရာမြားဖွငျ့ ရိုကျကူးကွညျ့ရာ မကျြရညျစကျနှငျ့ မတူဘဲ ဟနျဘာဂါနှငျ့ တူညီနသေညျ ကို တှရေ့သညျ။
၃၅၊ ပထမဆုံး အငျတာနကျဒိုမိနျး အမညျမှာ Symbolic.com ဖွဈပွီး ၁၉၈၅ ခုနှဈ မတျလ ၁၅ ရကျတှငျ မှတျပုံတငျခဲ့သညျ။
၃၆၊ ၁၈၇၆ ခုနှဈတှငျ ဂရဟေမျဘဲလျက တယျလီဖုနျးကိုတီထှငျခဲ့ရာတှငျ ပထမဆုံးလအတှငျး တယျလီဖုနျး ခွောကျလုံးသာ ရောငျးခခြဲ့ရသညျ။
၃၇၊ ရုံးမြား၏ စာရှကျစာတမျး ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့သညျ ပြောကျဆုံးမွဲပငျဖွဈသညျ။
၃၈၊ Business.com အမညျသညျလကျရှိအခြိနျတှငျဈအေကွီးဆုံး ဒိုမိနျးဖွဈပွီး ဒျေါလာ ၇ ဒသမ ၅ သနျးဖွငျ့ ရောငျးခခြဲ့ရသညျ။
၃၉၊ ၂၀၀၁ ခုနှဈက တနျဘိုးအမွငျ့ဆုံး ကုနျအမှတျတံဆိပျ ငါးမြိုးမှာ Coca-Cola, Microsoft, IBM, GE နှငျ့ Nokia တို့ဖွဈသညျ။
၄၀၊ ကနဒေါနိုငျငံတှငျ ကုနျထုတျစှမျးအား အကောငျးဆုံးနမှေ့ာ အင်ျဂါနဖွေ့ဈသညျ။
၄၁၊ ရှိကာဂို တက်ကသိုလျ၏ ၁၉၀၇ ခုနှဈတှငျ ပွုလုပျခဲ့သောစဈတမျးမြားအရ အလှယျကူဆုံး မွငျလှယျသော အရောငျသညျ အဝါရောငျဖွဈကွောငျးတှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။အဘယျကွောငျ့ ဟူမူကား ရှိကာဂိုမှ Yellow Cab အငှားကားကုမ်ပဏီသညျ ယငျး၏ ကား အားလုံးကို အဝါရောငျ သုတျထားသောကွောငျ့ဖွဈပသေညျ။
၄၂၊ The New York Times သတငျးစာ၏ တနင်ျဂနှထေုတျ သတငျးစာမြား ထုတျဝနေိုငျရနျအတှကျ ပမျြးမြှ သဈပငျပေါငျး ၆၃၀၀၀ ကို သတငျးစာစက်ကူ ပွုလုပျရသညျ။
၄၃၊ လုပျငနျးဆိုငျရာ စာရှကျစာတမျးတဈခုကို ပမျြးမြှအားဖွငျ့ မိတ်တူ ၁၉ ကွိမျဆှဲရလရှေိ့သညျ။
၄၄၊ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး အလုပျရှငျသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ အိန်ဒိယ မီးရထားလုပျငနျးဖွဈပွီး ဝနျထမျး ၁ ဒသမ ၆ သနျးခနျ့ တာဝနျ ထမျးဆောငျလကျြရှိသညျ။
၄၅၊ Happy Birthday တေးသီခငျြးကို Warner Chappel ဂီတအဖှဲ့က ပိုငျဆိုငျထားလရော ကမ်ဘာတဈဝှမျးတှငျ အသုံးပွုရနျ မူပိုငျခှငျ့ နှဈစဉျနှဈတိုငျး ဒျေါလာ ၁ သနျးခနျ့ရရှိသညျ။
၄၆၊ ကလေးတိုငျးသညျ မှေးဖှားစတှငျ အရောငျခှဲခွားနိုငျစှမျးမရှိကွပါခြေ။
၄၇၊ ကလေးမြားသညျ နှဦေးပေါကျရာသီ တှငျ အခွားအခြိနျမြားထကျ ပို၍ကွီးထှားလရှေိ့သညျ။
၄၈၊ လူတို့၏ နှာခေါငျးပေါကျ နှဈပေါကျသညျ အနံ့ အမြိုးမြိုးကို ခံယူသညျဖွဈရာယာဖကျနှာခေါငျးပေါကျက ဝဲဖကျ နှာခေါငျး ပေါကျထကျပို၍ အနံ့ကောငျးမြားကို ခံယူနိုငျသညျ။သို့သျောလညျး မညျသညျ့ အနံ့ ဖွဈသညျကို ဝဲဖကျနှာခေါငျးပေါကျက အတိ အကြ သိရှိနိုငျသညျ။
၄၉၊ လူတို့ကို မှေးဖှားစဉျက အရိုး သုံးရာငါးဆယျ ပါဝငျခဲ့သျောလညျး အရှယျရောကျခြိနျတှငျ အရိုး ၂၆၀ ခနျ့သာ ရှိတော့သညျ။
အရိုးတို့သညျ တဈခုနှငျ့ ဆကျကာ တဈခြောငျးတညျးဖွဈသှားသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
၅၀၊ မလေတှငျမှေးဖှားသောကလေးမြားသညျ အခွားလ မြားတှငျမှေးဖှားသော ကလေးမြားထကျ ၂၀၀ ဂရမျမြှ ပိုလေးတတျသညျ။
( ဂမ်ဘီရဆနျးကွယျ မဂ်ဂဇငျး )
Posted in AmazingTagged amazing, facts
Previous post ဒေါ်လာ သင်္ကေတ “ $ ” ဆိုသည်မှာ
Next post ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်းသတ္တ၀ါဖြစ်တဲ့ ဆင်တွေအကြောင်း